Mmụta dịpụrụ adịpụ
Mgbe achọrọ ụmụaka ka ha kewapụ onwe ha, anyị na-agba mbọ ịnye mmụta dịpụrụ adịpụ iji kwado mmepe ha. Anyị nwere ekele maka nkwado nke ezinụlọ anyị n'ịkwado nhazi agụmakwụkwọ ime obodo nke ọma nke akọwapụtara n'okpuru.
N'ihe banyere otu nwa ma ọ bụ obere ụmụaka nke kewapụrụ onwe ha na klaasị, onye nkuzi klaasị ga-eji Class Dojo kpọtụrụ ndị nne na nna ma kesaa ọrụ. Nke a ga -agụnye ọrụ nke kwekọrọ n'ihe a na -ekpuchi n'ụlọ akwụkwọ. Ụmụaka nwere ike bipụta ọrụ a ma ọ bụ mezue ya n'akwụkwọ dị iche. Enwere ike weghachite onye nkuzi site na klaasị Dojo foto nke ọrụ ọ bụla emechara, ebe a ga -enye nzaghachi izugbe kwa izu. A na -enwekarị ọrụ Bekee lekwasịrị anya na ọrụ mgbakọ na mwepụ kwa ụbọchị. A ga -enwe ọrụ dabere na isiokwu maka mmecha n'ime izu.
N'ihe banyere ikewapụ klas niile, a ga -enye ụmụaka nkọwa gbasara otu esi enweta agụmakwụkwọ dịpụrụ adịpụ site na Seesaw - na Ntọala nke a ga -abụ site na Tapestry. A ga -ezipụ ụmụaka ọrụ site n'elekere itoolu nke ụtụtụ kwa ụbọchị n'ụdị mmemme ịntanetị. A ga -enwekarị njikọ ị ga -elele yana ọdịnaya metụtara ya site na akụrụngwa anyị na -eji n'ụlọ akwụkwọ, gụnyere White Rose Maths, nha ọta BBC na Oak National Academy. N'elu nke a, ndị nkuzi ga -edekọ vidiyo mmụta yana ọrụ mmụta ụlọ. Otu ihe "dị ndụ" maka mmụta ụlọ ga-elekwasị anya n'ịnọgide na-enwe mmekọrịta onye nkuzi na nwa akwụkwọ na nwa akwụkwọ. Mgbe ụfọdụ, a ga -agwa ụmụaka ka ha mechaa ọrụ ha site na ngwa, n'oge ndị ọzọ, a ga -agba ha ume ka ha dee / mee / wuo iji gosipụta mmụta ha. N'ọnọdụ ndị a, ekwesịrị ịse foto. Ndị nkuzi ga -enyocha ọdịnaya kwa ụbọchị wee nye nzaghachi site na Seesaw ma ọ bụ Tapestry. Nzaghachi nwere ike ịbịa n'ụdị dị iche iche, na ọ nwere ike ọ gaghị abụ mgbe niile edere edere edere maka ụmụaka nke ọ bụla. A ga -emegharị ọrụ n'ime izu ahụ niile ka onye nkuzi na -enyocha klaasị na ọganihu nwata akwụkwọ n'otu n'otu. Anyị na -akụzi otu usoro mmụta dị anya dị ka anyị na -eme n'ụlọ akwụkwọ ebe enwere ike yana dabara adaba. Ụfọdụ isiokwu gbasara agụmakwụkwọ ga -achọ nnwere onwe karịa ọrụ Bekee na Math na anyị na -agba ụmụaka ume inyocha mmasị nke ha karịa ọrụ enyere.
A ga -agba ụmụ akwụkwọ niile nọpụrụ iche ume ka ha tinye aka na mmụta dịpụrụ adịpụ. Na mkpokọta, ụmụaka nọ na ọkwa nke mbụ kwesịrị imecha opekata mpe awa atọ nke ọrụ ụlọ akwụkwọ kwa ụbọchị mgbe ị na -ekewapụ onwe ya yana ụmụaka nọ na ọkwa nke abụọ kwesịrị imecha opekata mpe awa anọ. Ọ bụrụ na ụmụaka gụchaa ọrụ enyere (gụnyere vidiyo njikọ njikọ ọ bụla), anyị na -agba ụmụaka ume ka ha tinye aka na ngwa mmụta na weebụsaịtị dị iche iche ebipụtara na webụsaịtị ụlọ akwụkwọ anyị, ọkachasị Numbots maka KS1 na Times Tables Rock Stars maka KS2. Enwekwara atụ anya na ụmụaka ga -agụ maka oge dị mkpa kwa ụbọchị (opekata mpe nkeji iri atọ).
Mgbe ụmụaka na -enweghị ngwaọrụ iji nweta ọrụ a, enwere ike ịhazi ma bipụta akwụkwọ ozi. Ọ bụrụ na ọ dabara, a ga -agbazinye ezinụlọ ngwa ngwa ụlọ akwụkwọ iji kwado mmụta dịpụrụ adịpụ. Dị ka ụlọ akwụkwọ, anyị nwere obere ngwaọrụ dị maka ịkwado ezinụlọ na ịnweta mmụta dị anya. Biko kpọtụrụ Maazị Pollock site na klas Dojo ma ọ bụ site na email ( lewis.pollock@wentworthonline.co.uk ).
Ụmụaka ọ bụla nwere mkpa agụmakwụkwọ pụrụ iche kwesịrị ịkpọtụrụ Oriakụ Simcock (SENCO - gemma.simcock@wentworthonline.co.uk ) maka nkwado na ịnweta mmụta ụlọ. Oriakụ Simcock ga -enyocha ụmụaka nwere mkpa ndị ọzọ iji kwado ndị nkuzi klaasị n'iwepụ ihe mgbochi ọ bụla na mmụta ime obodo.
Dịka ụlọ akwụkwọ, anyị ga -enyocha ntinye aka nke ụmụ akwụkwọ ma gbaa ha ume ikere òkè na mmụta dịpụrụ adịpụ. Ndị nkuzi klaasị ga -akpọtụrụ site na Class Dojo ma ọ bụrụ na e nyefebeghị ọrụ. A ga -enye nkwado na ịnweta ọrụ ahụ iji hụ na ewepụla ihe mgbochi niile na ntinye aka. Anyị na -agba ndị nne na nna ume ka ha kparịta nsogbu ọ bụla metụtara njikọ aka ka anyị wee nwee ike rụọkọ ọrụ ọnụ.
Ọ bụrụ na enwere ajụjụ ọ bụla nwere ọrụ mmụta dịpụrụ adịpụ, a na -agba ndị nne na nna ume ịkpọtụrụ onye nkuzi klaasị site na klas Dojo. Enwere ike ịhazi nkwado ọzọ site n'elu ikpo okwu a.
Weebụsaịtị bara uru